စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ရှင်ရဲထွတ် ): March 2009
Tuesday, March 31, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 7:06 PM
15 ဝေဖန်ထားပါတယ်။ Links to this post
Sunday, March 22, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 12:37 PM
Thursday, March 19, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 11:53 PM
အစ်ကို ဒီနေ့ လစာထုတ်ရက် မဟုတ်လား..? အိမ်စောစော ပြန်လာနော်.! အစ်ကိုပြန်ရောက်မှ ညစာဝယ်ချက်ရမှာ!
အငယ်လေးရေ အုတ်နှစ်ချပ်လောက် မြန်မြန်ဟ..! ညနေဆို နင်လန်းပါပြီကွာ..! ဒီနေ့ လုပ်အားခ ရှင်းမယ့်နေ့ကွ!
ဟူး.... ခုမှပဲ လန်းတော့တယ်..! ကဲလာ.. အလုပ်ခေါင်းမှာ ငွေသွားထုတ်ရအောင်...!
ညီလေးရေ ခဏလေးကွာ...! ဆိုက် မန်နေဂျာ မလာသေးဘူးကွ...!
ကိုတိုးရေ... ဘော့စ်က ပြန်မလာသေးဘူးကွ..! ကိုယ်ဖုံးဆက်ကြည့် လိုက်ဦးမယ်...!
ဟဲလို... ဘော့စ်လား... ? ကျွန်တော် မန်နေဂျာပါ...! အလုပ်သမားတွေ ဒီနေ့ လုပ်အားခရှင်း...ရှင်း....!
အေ့..... မန်နေဂျာလားဟေ... အေ့...! နက်ဖြန်မှ ရှင်းပေးလိုက်ကွာ... အေ့.... ခု..ငါ မအားသေးဘူးကွ....အေ့..!
ညီမလေးရေ.... ဖေကြီး ပြန်လာပြီ....!
ဖေကြီး ဘာဝယ်ခဲ့လည်း..? သားဗိုက်ဆာလှပြီ! မီးလည်း ဆာတယ် ဖေကြီး..!
အစ်ကို ပြန်လာပြီလား...? အဆင်ပြေခဲ့လားဟင်...?
မိန်းမရာ လုပ်အားခ မနက်ဖြန်မှ ရှင်းပေးမယ်တဲ့...!
Thursday, March 12, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 9:43 PM
ကောင်း.... ကောင်းပါတယ် !
Tuesday, March 10, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 11:43 AM
8 ရက်နေ့3လပိုင်း 113း0 am မှ 13း0 pm အထိ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ toa payoh ပန်းခြံ oasis ခန်းမတွင် မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပပြီးစီး ခဲ့သော ဘလော့ဂါ ( မွေးရပ်မြေ ) နေးတစ် စိုးဝင်းဇော် နှင့် နန်းလင်းဟွမ် တို့အား ဤပို့စ်ဖြင့် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
တစ်ဆက်ထဲဖြင့် ဤမင်္ဂလာပွဲအား အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်တိုင် လာရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့သည့် အတွက် ဤနေရာမှ ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံအား အထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ( တွေ့ပုချိ )
ဤဇနီးမောင်နှံသည် ဤအိမ်ထောင်ရှင်ဘ၀ကို ခံယူကြရန် အရေးကြီးဆုံးသည် ဘယ်အကြောင်းအရာနည်း ? ၄င်းတို့နှစ်ဦးအား တွေ့ဆုံခွင့်ပေးရန် လေးနှင့်မြှားကို ကိုင်ဆောင်သော မြှားနတ်မောင်၌ တာဝန်ကျေရပေဦး မည်။ ဖူးစာဟူသည် ထူးလှပေစွ နေးတစ်သည် သဘောထားကောင်းသော တောင်ပိုင်းသား၊ လင်းဟွမ်သည်ကား သဘောဖြူသော မြောက်ပိုင်းသူ ဖြစ်ကြကုန်တော့သည်။
အနှီ မြှားနတ်မောင်၏ ပစ်လွတ်လိုက်သော ချစ်ခြင်းမြှားသည်ကား ထိုနှစ်ဦးကို ညွတ်ကွင်းသွားစေသည့် ဘူမိ နက်သန် နေရာမှန်သည်ကား တောများတောင်များ ၀န်းရံထားသည့် ရှုခင်းထွေထွေ မြောက်ပိုင်းရှမ်းမြေ တစ် နေရာတွင် ဖြစ်လေတော့သည်။
တာဝန်အရ ထိုနေရာ၌ ရောက်ရှိနေကြသော နေးတစ် ခမျာ လင်းဟွမ် သမီးပျိုလေးအား မြင်မြင်ချင်းးပင် ချစ်မိလေသောအား တီတီတာတာ ပလီပလာနှင့် လင်းဟွမ်၏ အချစ်အား မရအရ ငိုပြ၊ရီပြ ခဲ့တော့သည်။
လင်းဟွမ်ခမျာလည်း အမောင် နေးတစ်၏ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရသော ငိုခြင်း ရီခြင်း များကြားတွင် မေတ္တာစိတ်ဝင် ချစ်ခင် ခဲ့ရပြန်သည်တစ်မုံ့ တိတ်တိတ်ကလေးရယ်နဲ့ ကိုနေးတစ်ရယ် ဟောင်ဟတ်ဆူလို့ ပြောခဲ့မည်လို့ ရှမ်းတောင်တန်းကြီးများအား ပြန်မေးကြည့်လျှင် သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။
အနှီ ရှမ်းတောင်တန်းကြီးများအား သက်သေထူလို့ ထိုချစ်သူ နှစ်ဦးသည် တူနှစ်ကိုယ် နီးစပ်၍ ပေါင်းဖက်ရန် သစ္စာဆိုလေမည်လား ဆိုသည်ထက် ပတ်ဝန်းကျင် တောတောင်နံရံများတွင် ဤနှစ်ဦး၏ မေတ္တာဖက်သည့် သစ္စာစကားသံများမှာ ယခုထိတိုင် ပဲ့တင်သံ လှိုင်နေဦးမည် ထင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ထားခဲ့ဖူးသည့် သစ္စာ၊ ခိုင်မြဲခဲ့သော မေတ္တာအားကြောင့် ယခုဆိုလျှင် တူနှစ်ကိုယ် နိဗ္ဗန်နန်းတော်အား တည်ဆောက်ပြီးစီး ခဲ့ကြလေပြီ။
ဤကဲ့သို့ နှစ်ကိုယ်သစ္စာ အားဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဤအိမ် ဤယာအား ရာသက်ပန် သာယာလှပရန် အမောင်နေးတစ် ယောင်္ကျားကောင်း တစ်ယောက်၏ တာဝန်ကို မလစ်ဟင်းစေပဲ၊ အိမ်ထောင်ရှင်မ လင်းဟွမ် သည်လည်း မယားဝတ္တရားများအား ကျေပွန်၍ မိမိခင်ပွန်းအား အကောင်းဆုံး ပါရမီ ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ပါစေ။
ဤလင်ဤမယား သေတပန် သက်တဆုံး ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ။
နွေဦး လေရူး မောင်ဖုန်း ရူးပြီ
Sunday, March 1, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:14 AM
နွေဦးချိန်တွင် လေရူးထွေလို့ မောင်ဖုန်းခမျာ ရူးရှာလေပြီ။